Hay'adda Caafimaadka Adduunka oo Tanzania ku eedeysay in ay qarisay dad qaba cudurka Ebola
Mogadishu - 14:41:35
Sunday September 22, 2019 - 19:39:16 in Wararka by Super Admin
Dar es Salaam -Africa News
Hay’adda Caafimaadka Addunka ee WHO ayaa ku eedeysay waddanka Tanzania in ay qariyeen muwaadiniin dalkaasi u dhashay oo laga helay cudurka Ebola, iyagoo isla markaana ka soo jawaabi waayay xiriirro dhowr ah oo ay hay'addu la soo sameysay si ay macluumaad uga helaan dadkaasi.
WHO waxa ay la tacaalaysaa Virus-ka Ebola, kaas oo Afrika ku dilay in ka badan 2,000 oo qofood.
Warbixin ay WHO soo saartay ayaa waxa ay ku sheegtay in 14 September ay ka war heleen in qof Dar es Salaam ku nool laga helay xumadda (Hemorrhagic fever), iyadoo qofkaasina la karantiilay, halka sidoo kalena laba qof oo kale lagu tuhmayo in ay iyaguna la xanuunsanayaan Ebola.
Dhowr codsi oo ay hay’addu u dirtay Tanzania ayaa dowladdu ka soo jawaabi weysay.
Tanzania ayaa si cad u sheegtay 14-kii September in dalkeeda aan laga helin qof qaba Ebola, waxaana ay ku gacan seyrtay in tijaabo labaad xarumaha hay’adda WHO looga qaado dadka lagu sheegay in ay qabaan cudurkani dilaaga ah.
Dhanka WHO waxa ay Khamiistii xiriir la sameeyeen Dar es Salaam iyagoo ogaaday in qofkii lagu helay kiiska Ebolaha uu aad u liitay, loona dhaadhiciyay Isbitaalka.
Dalalka Bariga Afrika ayaa digniinno culus loo diray wixii ka dambeeyay markii dhowaan waddanka DR Congo oo deris la ah Tanzania uu ka dillaacay cudurka Ebola, kaas oo sanad gudihiisa ay u dhinteen dad ka badan 2,100 ruux.
Dhanka waddanka Uganda ayaa isna waxaa xanuunkan laga helay 4 qofood oo kaddibna u dhintay, waxaana xusid mudan in intii u dhexeysay 2014-2016 waddammada Guinea, Sierra Leone iyo Liberia uu Ebola ku dilay dad ka badnaa 11,000 oo qofood.